Classification of screw conveyor factory and suppliers | Gaomi Mingda
Kuramba chando rinopfungaira 2.5-6mm (Cold yakanyikwa coils spreader)
Single jira isobaric Stainless simbi yakaderera chiwanikwa simbi
Vane pasina mugodhi
Ichitenderera uchafira kuita diki-bore2,5-6mm
Kupatsanura pakati sikuruu conveyor
Kushanda musimboti sikuruu conveyor
Features uye kushandisa mugodhi-zvishoma sikuruu conveyor
(1) wehunyambiri sikuruu conveyor
The kutenderera nokumhanya yacho sikuruwa wehunyambiri sikuruwa conveyor wakakwirira kupfuura zvavo sikuruu conveyor. Pasi zvinoitwa Centrifugal simba, kukweshera iri vanowanika pakati mashoko uye yakakomberedzwa. kukweshera Kanoita mashoko kubva kutenderera pamwe zononoka chipande uye chinokunda kukomba acho anowira pasi, saka kuziva wehunyambiri irikupa of material.This muchina conveyance uwandu iri diki, conveyance kureba iri diki, kutenderera kumhanya yakakwirira, simba rakawanda riri big.It ari kunyanya akakodzera irikupa powdery uye granular zvokuvakisa pamwe fluidity zvakanaka, iro ainyanya kushandiswa itakurwe zvinhu. Nokusimudzwa kukwirira Kazhinji hapana kupfuura 8 mamita.
(2) chinjikira sikuruu conveyor
Kana zvinhu kupinda wakaiswa pakati machine slots, nokuda kukomba zvokunyama uye zvainoita uye kukweshera pakati machine slots, zvinhu achiunganidza nechepasi pane muchina hakurevi tenderera pamwe akamonyoroka, uye chete ari kutenderera helical vanekuva inodzingwa kuenderera mberi, sezvinoita kwete kutenderera nati pamwe vachishandisa kutenderera sikuruwa nokuda translational inofamba, kuti awane chinangwa pakusvitsa material.The muchina zviri nyore kuti multi-pfungwa vachizvitakudza uye vachidzikisa, uye anogona kusanganiswa, vakamutsa kana dzaserera panguva imwe chete panguva yokuudza. Nehanya zadzisa, nyore chivhariso; The ratanga unorema kurasikirwa, sechivako chinjikira sikuruwa conveyor zviri nyore, nyore kuisa, kuchengetedza uye disposal.
Akakodzera chinjikira kana zvishoma vachida kuramba yunifomu irikupa unzenza zvokunyama, kushanda zvakatipoteredza tembiricha iri -20 ~ 40 ℃, tembiricha kuti irikupa zvinhu - 20 ~ 80 ℃ .Its kutenderera nokumhanya iri pfupi pasi zvichienzaniswa hunyambiri conveyor, zvikurukuru kushandiswa chinjikira kana chiduku zvaidiwa kuchinjirwa nokuda zvokuvakisa, ari nezvifambiso daro kazhinji mukuru 70 mamita.
(3) sikuruwa nyere (chinotenderera conveyor) conveyor
The zononoka chubhu conveyor chinhu chinoramba zononoka chipande welded mukati cylindrical goko, ari cylindrical goko rotates pamwe zononoka chipasa pamwechete. Nokuda Centrifugal simba uye kukweshera, tainge zvinhu rotates pamwe dzimba uye rwakasimudzwa, mashoko pasi chiito regiravhiti nemasiraidhi achitevedza zononoka pamusoro, kuti zvinhu pamwe zononoka nyere majana kuti kuziva zvinhu kuenda mberi, asingadi kutenderera pamwe vachishandisa kutenderera sikuruwa nati nokuda translational inofamba, kuti awane chinangwa pakusvitsa zvinhu.
Low simba zvinodyiwa uye pasi rechengetedzo mutengo; Kana kupa pakupera, zvinogona kuchinja zvinodiwa gogonera kudyisa, uye anogona kupedza siyana rwokugadzira zvinodiwa zvakadai yokuudza, unomutsa nokusanganisira panguva imwecheteyo time.It iri nyore vapinze uye tutunura multi-pfungwa, uye vanogona kutaura zvinhu pamwe yepamusoro tembiricha. Akakodzera chinjikira irikupa mukuru tembiricha nezvinhu; It ane anochinjika chakanaka zvokuvakisa dzakakwirira tembiricha, gogonera zvinhu wedzerai, Anti Kupwanywa uye Anti-kusvibiswa zvinodiwa, uyewo muitiro rinoda multi-pfungwa vachizvitakudza uye vachidzikisa. Practice yakaratidza kuti inobudirira rokutakura simende clinker, yakaoma reraimu, phosphate mhangura, ilmenite upfu, marasha uye gang.
The PARTICIPLE kukura zvinhu akawedzera pakuguma Inlet haangavi mukuru 1/4 dhayamita pakati sikuruwa. The PARTICIPLE Kukura nezvinhu kubva zvenguva inosimbisa Inlet haanganyadziswi mukuru 30mm. Kuti vave nechokwadi humburumbira Haibudisi deformation, ndinorova tembiricha anofanira kudzorwa pasi 300 ℃. The abrasion pamusoro chipande uye muchimwiro chakakomba zvikuru apo irikupa mbishi zvinhu.
(4) tefa sikuruu conveyor
The sikuruwa mandrel kuti muchina uyu kuchinja, saka irikupa mutsetse dzinogona kurongwa maererano nzvimbo munyonga. Maererano pakureba inorwara chinjikira uye kutwasuka (guru Dip) zvikamu zviri marongerwo mutsetse, ayo tichishanda musimboti yakagadzirirwa maererano zvavo sikuruwa conveyor kana wehunyambiri sikuruu conveyor.
Nokuti Kupfuudzwa mutsetse anofanira pamadiro kurongwa maererano nzvimbo munyonga kunzvenga mamiriro ezvinhu zvokunyama chinja; Kana yakawandisa zvinhu kana zvinhu zvakaoma Anoiswa muchina goko, iyo zononoka achaita kuyangarara pachena pasina blocking.The ruzha iri small.It dzinowanzotsigi- kushandiswa chinjikira uye wehunyambiri irikupa nezvinhu panguva imwe chete. Kumhanya kutenderera rinowanzoshandiswa kunodiwa kuti kupfuura 1000r / Maminitsi mu wehunyambiri hutachiwana.
Post nguva: Aug-15-2018
Address: Jiangzhuang logistics park, Gaomi City, Shandong dunhu, China
Features uye kushandisa mugodhi-zvishoma SC ...